news: video: youtube
လေထုညစ်ညမ်းစေသူများအားအရေးယူမည်.... ကျန်းမာရေးအတွက်လေလည်ခြင်းဟာ ပြစ်မှုတစ်ခုအဖြစ် အာဖရိကတိုက်ရဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုမှာ ဖြစ်ပေါ်လာမှာ
Another said: 'We have serious issues affecting Malawians today. I do not know how fouling the air should take priority over regulating Chinese investments which do not employ locals, serious graft amongst legislators, especially those in the ruling party, and many more.' The crime will be enforceable inanew 'Local Court' system which will also have powers to punisharange of other crimes in the bill set to be debated in the country's parliament. Posted by
news: daily telegraph
ကံအဆိုးဆုံးလူသား... လွန်ခဲ့ သည့် လေးနှစ်က ဂျွန်ဝါဒီအဂန်တစ်ယောက် သူမောင်းနေခဲ့သည့် တက္ကစီကားပေါ်မှာပင် သေနတ်
ဖြစ်ပါတယ်... ဘုရားစူး...မိုးကြိုးပစ်၊ ဓါးပြတိုက် ၊ မြွေကိုက်လို့ မကျိန်ပါနဲ့ ဗျာ...အခုတော့ ကျွန်တော့် ကိုအကုန်လုံးဖြစ်နေပြီ...
သူ့ ထက်ကံဆိုးတဲ့ သူတောင် သူ့ လောက်ကံဆိုးလိမ့် မယ်မထင်ဘူး... Four years ago, John Wade Agan told deputies he was robbed at gunpoint in his taxicab, roughed up and stuffed into the trunk of the car. Three years ago, he drove toafire station withabutcher's knife sticking out of his chest. Two years ago, inanews conference from his hospital bed, he told the world he'd been bitten by two different snakes at the same time,aclaim experts doubted.
He said he might have been the unluckiest man in the world. Now, Agan, 47, occupies another hospital bed, befallen, he said, by yet another freak calamity: lightning. He said it happened on Tuesday evening during the severe storm that hit the area. He was leaning overametal kitchen sink, holdingacorded phone up to his ear, when he heardaloud boom. He said he blacked out. His 26-year-old daughter, Misty Agan, was standing just feet away from him and said she heard the phone drop. "Oh! Oh! Oh!" she said she heard her dad say before he crumpled to the ground and began to shake. Agan said he awoke surrounded by paramedics, finding his right shoe off andabig hole in his sock. "It felt like it was on fire," he said
He knows what people say about him — what they said after reading about his snakebites, what some will say when they read this story — that he's lying or somehow hurting himself, maybe to get pain medicine. "I don't care what people say," Agan said. "Any day of the week, I'll go takeadrug test." There's no way to prove someone has or hasn't been struck by lightning, experts say. John Agan doesn't have any obvious burn marks. Most victims don't. Posted by
အချစ်ကြောင့် ပူနွေးဆူဝေကြသူများ.... ရုရှားနိုင်ငံ၊ ဆိုက်ဘေးရီးယားနယ်တွင် လွန်ခဲ့ သည့် စနေ နေ့ က အလွန်ထူးခြားသည့် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်မဟုတ်
ထပ်တာက လွဲယင် ကျန်တာဘာပဲလုပ်လုပ် ကျွန်တော့် အတွက် ချစ်တယ်လို့ မသတ်မှတ်နိုင်ပါဘူး... ကျွန်တော်ကတော့ဇနီးဖြစ်သူအနေနဲ့ ကျွန်တော့် ကိုနားလည်ပြီး လက်ထပ်ပွဲကို အဖော်အချွတ်ကလပ်မှာ
ပါတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀န်းကကွယ်...အေးချင်သလောက်အေးပါစေ...ရင်ထဲမှာတော့ အချစ်တွေနဲ့ ပူနွေးဆူဝေနေလေရဲ့ .... ကြည်နူးအေးချမ်းစွာအချစ်ဖြင့် ထုံမွှမ်းထားအပ်သော...
အသက် ၁၄ နှစ်မှာကလေးအဖေဖြစ်ခဲ့ သူက ၂၉ နှစ်တွင် အဖိုးဖြစ်လာ.... ၎င်း၏အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်ရှိသမီးဖြစ်သူက လာမည့် နွေရာသီတွင် ကလေးမီးဖွားတော့ မည့် အမျိူးသား
“Her own mum is alive, and so too is her grandmother, who will becomeagreat-great-great grandmother. There can’t be too many families with six generations alive at the same time.” The UK’s youngest grandmother was 26 when her daughter, 12, gave birth at their home in Rotherham, South Yorks, in 1999. Posted by
news: mirror .co.uk
ဒိုးဖိုဘစ်စ်ရဲ့ ဘ၀ ဒိုးဖိုဘစ်စ် ကိုဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲအလွန်ရှားပါးသည့် မွေးရာပါခါးရိုးချွတ်ယွင်းမှု၊ မသန်မစွမ်းရောဂါ ဖြင့် မွေးဖွား
ဘ၀မှာ အရှုံးမပေးချင်တဲ့စိတ်ဓါတ်ရှိဖို့ ပဲလိုပါတယ်.... Doug Forbis was born withavery rare health condition called sacral agenesis. It's whenathe spine doesn’t develop properly in the womb and people are born mostly without legs. But even sacral agenesis couldn't stop Doug Forbis from being happy. This 24-year-old guy hasagirlfriend, love wheelchair sports and wants to beateacher for children with special needs.
အချစ်မှာ မညီမျှမှုတွေဆိုတာ မရှိပါဘူး....အဲဒီလိုစိတ်ထားနိုင်ယင်တော့ ကောင်းတာပေါ့ လေ...
Photo : General Knowledge
ညှော်ကြမယ်ဟေ့ ကောင်းကောင်း... ဖင်လန်နိုင်ငံ၊ အက်စပူးမြို့ မှ လူနေတိုက်ခန်းတစ်ခုတွင် ငရုပ်သီးလှော်နံ့ ကြောင့် အသက်ရှူမွန်းကြပ်မှုပြ
The occupant and her child escaped the fumes onto their balcony, and did not need medical attention. The four people taken to the hospital were not seriously injured by the chilli fumes, according to the rescue services. Posted by
ခိုးရာလိုက်ပြေးသည့် အာဖဂန်စုံတွဲကျောက်တုံးဖြင့် ပစ်ပေါက်သတ်ဖြတ်စီရင်ခံရ ခါးလောက်မြင့်သည့်ကျင်းထဲမှာအမြုပ်ခံရပြီး...
ချစ်သူနှင့် ထွက်ပြေးသည့် အိမ်ထောင်ရှင်.... ၎င်းနောက် သူမ၏ချစ်သူ ခေယမ် ကိုလက်ပြန်ကြိုးတုတ်ကာ လူအုပ်ရှေ့ သို့ ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ ပါတယ်....
၀ိုင်းဝန်းအားပေး ဆွမ်းကြီးလောင်းသူများ... ဆစ်ဒ်ကာ ဟာ သူမရဲ့ အလိုဆန္ဒနှင့်ဆန့် ကျင်ပြီး မိဘများကို သူမကို ဒေါ်လာ ၉၀၀၀ ဖြင့် ရောင်းချစီစဉ်ခဲ့ 
မောင်ရင်းတို့ ကို ဘာမှမလုပ်ပါဘူး...ကျောက်ခဲလေးတွေနဲ့ ပဲပစ်ပေါက်ကျည်စယ်ပါမှာ...
Horrific video footage has emerged of Taliban insurgents stoningacouple to death for alleged adultery in northern Afghanistan. Hundreds of villagers can be seen on the video standing around as the woman, Siddqa, is buried up to her waist inafour foot hole in the ground.
ဘာအခုမှကြောက်ပါပြီလည်း.... ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်နေထိုင်လျှက်ရှိသည့် တူရကီအမျိူးသားတစ်ဦးဟာ ၎င်းနှင့် ၁၈ နှစ်ကြာပေါင်းသင်းလာခဲ့ 
အခုတော့ ကျွန်တော့် မှာခြေဖ၀ါးနှစ်ခုနဲ့ ပါဗျာ... တရုတ်နိုင်ငံမှ ဆေးရုံတစ်ရုံတွင် လူနာတစ်ဦး၏ဘယ်ဖက်ခြေထောက်နှင့် ခြေဖ၀ါးအား ဖြတ်ပစ်ဆုံးရှုံးရခြင်း
မှကာကွယ်နိုင်ရန် ၎င်း၏ဘယ်ဖက်ခြေဖ၀ါးအားဖြတ်၍ ညာဖက်ခြေထောက်တွင် ( ခေတ္တယာယီအားဖြင့် ) ထပ်မံတွဲချူပ်ကာ တပ်ဆင်ပေးခဲ့ ကြပါတယ်...
မစ္စတာမားလို့ အမည်ရှိတဲ့ လူနာမှာတော့ ဘယ်ဖက်ခြေထောက်ကို ကယ်တင်ဖို့ လောလောဆယ်ညာဖက်ခြေထောက်မှာ ခြေဖ၀ါးနှစ်ခု တပ်ဆင်ထားခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်...The patient, named as Mr Ma, has had his left foot attached to his right leg inabid to save the limb following an accident at work
ညာဖက်ခြေထောက်က သွေးကြောတွေကိုသုံးပြီး ဘယ်ဖက်ခြေဖ၀ါးကို ဆက်လက်ရှင်သန်နေအောင်ထိန်းသိမ်းထားပြီး တစ်လအကြာမှာတော့ ဘယ်ဖက်ခြေထောက်မှာ ပြန်လည်တပ်ဆင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်...Doctors are using the right leg's vein and arteries to keep it healthy and hope to reattach the foot to the left leg inamonth's time
ဆရာဝန်များက ၎င်း၏ဘယ်ဖက်ခြေဖ၀ါး ( ခြေကျင်းဝတ်အောက်ပိုင်း ) ကိုညာဖက်ခြေထောက်တွင်ပြန်လည်ချူပ်လုပ်တပ်ဆင်ကာသွေကြောများ လှည့် ပါတ်စီးဆင်းခြင်းဖြင့် ထိုခြေဖ၀ါးဆက်လက်ရှင်သန်နေစေကာ အချိန်ကာတစ်ခုအထိ လူနာအားခြေဖ၀ါးနှစ်ခုဖြင့်ရှိနေစေမှာဖြစ်ပါတယ်...နောက်တစ်လလောက်အကြာမှာတော့လူနာရဲ့ ခြေဖ၀ါးကိုဘယ်ဖက်ခြေထောက်မှာ ပြန်လည်ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်ပြီး ပြန်တပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်...
တော်တော်လည်းစိတ်ကူးကောင်းတဲ့ တရုတ်ဆ၇ာဝန်များပါပေပဲ....ခွဲစိတ်ဖြတ်တောက်၊တပ်ဆင်ကုသမှုအောင်မြင်မှုရှိမရှိကတော့ စောင့် ကြည့် ရမှာပါပဲ....
A hospital in China has sewn the left foot ofapatient on to his right leg inabid to save both the foot itself and his left limb.The patient, named as Mr Ma, had the surgery in Zhengzhou, in central China, followingawork accident two weeks ago which badly damaged his left leg.It appears that doctors felt that the infected wound in the leg would have ultimately led to amputating the foot and leaving the limb 7in shorter - so decided to make their radical decision.They decided to attach the left foot to the right leg and use that limb's arteries and veins to keep the foot healthy thereby leaving the patient, for the moment, with two right feet.Further surgery will then reattach the foot back to the patient's left leg in aroundamonth's time.
news: daily mail.co.uk
သပ္ပေါတွေနဲ့ ပြည့် နေတဲ့ အိမ်... This house where thousands of snakes dwell, is on cheap sale
လျှော့ ဈေးနဲ့ ရောင်းမယ် ....ဒါပေမယ့် မြွေတွေကတော့ ထောင်နဲ့ သောင်းနဲ့ ချီပြီးရှိနေတယ်... အမေရိကန်နိုင်ငံမှ Chase Bank ဟာ Idaho ပြည်နယ်၊ Rexburg အရပ်ရှိဒေါ်လာ ၁၇၅၀၀၀ ခန့် တန်ဖိုးရှိ
မျော့ ကြိုးမြွေတွေဟာ အဆိပ်မရှိလို့ လူကိုတော့အန္တရယ်မဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး... Garter snakes are not poisonous and are harmless to humans
ယခုတော့ အမှန်အကန်အိမ်ရှာရန် အိမ်အကျိူးဆောင်ကုမ္ပဏီမှ Todd Davis အတွက်ကတော့ ထိုအိမ်ကို ၀ယ်မည့် သူ ရအောင်ရှာဖို့ ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးပမ်းနေရပါတယ်...
The Chase Bank in the US is sellingahouse in Rexburg, Idaho, for US$66,000 (RM201,415) less than its estimated value of US$175,000 (RM534,056) because it's infested with thousands of snakes. The home went into foreclosure after owners Benjamin and Amber Sessions were forced into bankruptcy.
The reptile occupants are believed to be common garter snakes,atype found throughout the US. They are not poisonous and are harmless to humans. But, according toapest inspector, thousands are living in the house.
ကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံး အဆင့် မြင့် စားသောက်ဆိုင်ဒူဘိုင်းတွင်ဖွင့် လှစ် အမြင့် ဆုံးမှာကျွေးချင်ယင် ဒီကိုကြွခဲ့ ပါမိတ်ဆွေ... ကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံးစားသောက်ဆိုင်ဖြစ်သည့် Atomsphere ကိုဒူဘိုင်းရှိကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံးအဆောက်အဦးဖြစ်သည့် Burj Khalifa ၏ ၁၂၂ ထပ်မြောက်အလွှာမြေပြင်မှ ၄၂၂ မီတာ ( ပေပေါင်း ၁၃၅၀ ) အထက်တွင်လွန်ခဲ့ သည့် တနင်္ဂနွေနေ့ ကဖွင့် လှစ်ခဲ့ လိုက်သည်ဟု ထိုအဆောက်အဦး၏ပိုင်ရှင်များကပြောကြားခဲ့ လိုက်ပါတယ်...
မီတာ ၈၂၈ မီတာ ( ပေပေါင်း ၂၇၁၆.၅ ) မြင့် သည့် ထိုအဆောက်အဦးတွင်တည်ရှိသည့် Atmosphereစားသောက်ဆိုင်သည်ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး ဇိမ်ခံစားသောက်ဆိုင်များထဲတွင်တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည်ဟုဒူဘိုင်း၏အကြီးမားဆုံး တိုက်တာခြံမြေ၊ မြေကွက်ဖော်ထုတ်တည်ဆောက်ရေးကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်သည့် Emaar ကုမ္ပဏီကြီး၏ အဖွဲ့ ခွဲ Emaar Hospitality အုပ်စုကုမ္ပဏီကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်... အထူးမွေးနေ့ ပွဲလိုမျိူးကျင်းပနိုင်မယ့် သီးသန့် ခန်းနဲ့ လည်း ရနိုင်ပါတယ်... ဒီလိုလေးရှုခင်းတွေကြည့် ယင်း သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်...
ကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံးစားသောက်ဆိုင်တွင် လာရောက်စားသောက်မည့် ဧည့် သည်ပေါင်း ၂၁၀ ဆန့် ပြီး ကျယ်ဝန်းသန့် ရှင်းသည့် ဧည့်ကြိုခန်းမ၊ အဓိကစားသောက်ဆောင်၊ ကိုယ်ပိုင်သီးသန့် စားသောက်ခန်းများနှင့် သရုပ်ပြချက်ပြုတ်ဆောင်တို့ ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်... အခင်းအကျင်း...
တွင် လာရောက်ကြည့် ရှုသူတစ်ဦးလျှင် ၁၀၀ ဒီဟန်း ( ၂၇ ဒေါ်လာ ) ပေးရသည့် အဝေးကြည့် (မျှော်စင်ပေါ်မှပြင်ပသို့ ကြည့် ရှုလေ့ လာနိုင်သည့်) ပြခန်းလည်းပါဝင်ပါတယ်...
၂၀၁၀ ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက်နေ့ ကဖွင့် လှစ်ခဲ့ ပြီး ခြောက်နှစ်ကြာတည်ဆောက်ခဲ့ ရသည့်၂၇၁၇ ပေမြင့် ကမ္ဘာ့ အမြင့် ဆုံးအဆောက်အဦး ဘုဂ်ျကာလီဖာ....Emaar ကုမ္ပဏီဟာ အဆိုပါမိုးမျှော်တိုက်အဆောက်အဦးကြီးကို ဒေါ်လာ ၁.၅ ဘီလီယံအကုန်အကျခံပြီး
အား ကူညီကယ်တင် ထောက်ပံ့ ပေးခဲ့ သည့် ယူအေအီးသမ္မတ ( အဘူဒါဘီပြည်နယ်စော်ဘွား ) ရှိတ်ကာလီဖာ ဘင်ဇာယက် အယ်လ်နာယန် ကိုဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် Burj Khalifa ဟုအမည်ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ ပါ
ထူးထူးခြားခြားစားသောက်ဆိုင်များ...ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အူဆန်နိုမီယာမှ ကာယာဘူကီယာတာဗန်း စားသောက်ဆိုင်မှာတော့ စားပွဲထိုးတွေက
သတင်းကို AFP / daily mail မှရယူကာ ဓါတ်ပုံများကို daily mail မှရယူတင်ပြပါတယ်...DUBAI - Dubai opened on Sundayarestaurant 422 metres (1,350 feet) up in the sky on the 122nd floor of the world’s tallest building, Burj Khalifa, its developers said. Atmosphere in Dubai’s 828-metre (2,716.5-feet) building is “one of the finest luxury dining and lounge experiences in the world,” said Emaar Hospitality Group, an arm of giant property developer Emaar. At two levels below the tower’s observation deck, the “world’s highest restaurant” can host “over 210 guests and featuresaspacious arrival lobby,amain dining floor, private dining rooms and display cooking stations.” In addition to apartments, offices and Italian designer Giorgio Armani’s signature hotel, the building has an observation deck on the 124th floor, open to visitors at an entrance fee of at least 100 dirhams (27 dollars) per adult. Emaar spent 1.5 billion dollars on the tower, named after United Arab Emirates (UAE) President Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahayan who came to the aid of Dubai, hit by the global financial crisis. Oil-rich Abu Dhabi extendedalifeline of 10 billion dollars, on top of the same amount from the UAE central bank, to bail out Dubai’s heavily-indebted state firms in 2009. UNIQUE RESTAURANTS- At the Kayabukiya Tavern in Utsunomiya, Japan, you will be served by monkeys
ကောက်ရငွေ ထိုင်ဝမ် ၁.၁ သန်း ပြန်ပေးသည့် အမှိုက်ကောက်အမျိူးသမီး...Yang (left) returning the money to Lin (right)ပိုင်ရှင်ထံသို့ ငွေများပြန်အပ်စဉ်... ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံမှ အကျင့် စာရိတ္တရိုးသားရိုးသားဖြူစင်ဖြောင့် မတ်သည့် အမှိုက်ကောက်သည့် အမျိူးသမီးကြီးတစ်ဦးဟာ ထိုင်ဝမ်ငွေ ၁.၁ သန်း ( ဒေါ်လာ ၃သောင်း ၇ ထောင်ကျော် ) လမ်းမပေါ်မှတွေ့ ရှိကောက်ရခဲ့ ပြီးနောက် ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူထံသို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့ ပါတယ်...အသက် ၆၇ နှစ်ရှိ ယန်းဟွမ်မူဒန်း အမည်ရှိအမျိူးသမီးကြီးဟာ ( ကောက်တွေ့ လို့ ပြန်အပ်လျှင်ရရှိနိုင်မည့် ဆုကြေးငွေ ) သုံးရာခိုင်နှုံးကိုပင် လက်ခံဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ ပါတယ်...သို့ သော်လည်းအတန်တန်ဖြောင်းဖျပြောဆိုခဲ့ ပြီးနောက်မှာတော့ သူမဟာ ထိုင်ဝမ်ငွေ ၃၀၀၀ ( ဒေါ်လာ၁၀၀ ကျော်ခန့် သာ ) ကိုသာလက်ခံယူခဲ့ ပါတယ်လို့ အန်ပေါင်း သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်..." ကျွန်မတစ်သက်တာမှာဒီလောက်များတဲ့ ငွေတစ်ခါမှမမြင်ခဲ့ ဖူးပါဘူး....ယူထားလိုက်မိယင်လည်းကျွန်မတစ်သက်လုံး အပြစ်ရှိသလိုခံစားနေရမှာအမှန်ပါပဲ...ဒီငွေကိုကျပျောက်ခဲ့ တဲ့ သူဆိုလည်းတော်တော်ကိုစိတ်ပူနေမှာပါပဲ..." လို့ တစ်လလျှင်ထိုင်ဝမ်ငွေ ၅သောင်း( ဒေါ်လာ ၁၇၀၀ ကျော် ) ၀င်ငွေရရှိသည့် ယီလန်ဒေသမှ အမျိူးသမီးကြီး ယန်း ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...သူမရဲ့ ရိုးသားဖြောင့် မတ်မှုကို ရဲတပ်ဖွဲ့ နှင့် အိမ်နီးနားချင်းများက ချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ ပြီး သူမအတွက်၎င်းတို့ အနေနဲ့ ဂုဏ်ယူရပါတယ်လို့ ဆိုခဲ့ ပါတယ်... Yang is respected for her honestyသူမရဲ့ ရိုးသားဖြူစင်မှုကြောင့် လူအများက လေးစားရပါတယ်... မူလတန်းပညာသာတတ်မြောက်ခဲ့ သည့် ယန်းဟာ လွန်ခဲ့ သည့် ၂၅ နှစ်အကြာက ခင်ပွန်းဖြစ်သူကွယ်လွန် သွားပြီးကတည်းက သားသမီး ခြောက်ယောက်ကို ပြုစုစောင့် ရှောက်လာခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...လွန်ခဲ့ သည့် စနေနေ့ နံနက်ပိုင်းမှာတော့ ဈေးထဲမှ ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ ရသည့် (ကတ္တူစက္ကူကဲ့ သို့ ) စွန့် ပစ်ပစ္စည်းအနည်းငယ်ကောက်ယူခဲ့ အပြီးမှာငွေတွေထည့် ထားသည့် အိတ်ကိုတွေ့ ရှိခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...ငွေတွေကိုပိုင်ရှင်ထံပြန်လည်အပ်နှံနိုင်ဖို့ သူမဟာ ရဲစခန်းကိုအလျင်အမြန်သွားရောက်ခဲ့ ပြီး နောက်စိုးရိမ်ပူပန်နေရှာတဲ့ လင်း ဟုသာဖော်ပြသည့် စာရင်းကိုင်စာရေးနှင့် တွေ့ ရှိခဲ့ ရတာဖြစ်ပါတယ်...လင်း ကသူမဟာထိုငွေများကိုဘဏ်သို့ သွားရောက်အပ်နှံရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ သူမကားဆီသို့ လျှောက်သွားနေခဲ့ စဉ် သူမ၏ဖုံးအသံမြည်လာခဲ့ လို့ ငွေထုတ်ကို ကားစက်ဖုံးပေါ်တင်ခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပါတယ်...ဖုံးစကားပြောပြီးနောက် ငွေထုတ်ကိုလုံးဝမေ့ လျော့ သွားကာ ကားကိုမောင်းထွက်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...အသက် ၃၇နှစ်ရှိ စာေ၇းမဟာ ကားမောင်းသွားပြီး တစ်ကီလိုမီတာလောက်အရောက်ကျမှ သူမငွေအိတ်အကြောင်းကို သတိရမိခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...သူမဟာ အမျိူးသမီးကြီးယန်း ကိုအကြိမ်ကြိမ်ကျေးဇူးတင်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်...
တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်၇လို့ ကိုယ်ပြန်ခံစားရတဲ့့ပီတိ၊ စိတ်ချမ်းသာမှုက ပိုပြီး စိတ်ချမ်းသာရပါတယ်...စာရိတ္တပျက်ပြားနေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ တွေ့ ရခဲတဲ့ ကိုယ်ကျင့် သီလဖြူစင်မှုတစ်ခုပါပဲ...ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံက အမှိုက်ကောက်သူတစ်ယောက်ရဲ့ ဝင်ငွေကလည်း တစ်လ ဒေါ်လာ ၁၇၀၀ ကျော်ရှိတယ်တဲ့ ဗျာ...ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ မကြီးကိကိ တို့ ဆိုယင်ဒီထက်ဘယ်နှစ်ဆတောင်ပိုရနေဦးမလည်းမသိဘူး...ဒူဘိုင်းမှာအမှိုက်မကောက်ပဲ ထိုင်ဝမ်မှာအမှိုက်သွားကောက်ယင်ကောင်းမလားပဲ...ဒါပေမယ့် ကိုယ်ကမန်ဒရင်းပဲနည်းနည်းပါးပါးရတာ၊ ကန်တုံနိစ် မရလို့ ဖြစ်မယ်တော့ မထင်...
An honest trash collector in Taiwan returned NT1.1mil (RM115,659) which she picked up from the street to the owner. Yang Huang Mu-dan, 67, also refused to take the three-per cent reward she was entitled to.However, after much persuasion, she agreed to takeaNT$3,000 (RM315) ang pow."I have not seen so much money before. If I take it, I would feel guilty for the rest of my life."The person who lost it must be very anxious," said Yang of Yilan, who earnsamonthly household income of about NT$50,000 (RM5,254).Her honesty has been highly praised by the police and her neighbours, most of whom said that Yang had made them proud.
Yang, who only received primary education, has been takings care of her six children alone after her husband died 25 years ago.On Saturday morning, after collecting some recyclable items from the market, she found the bag containing the cash.In an attempt to return the money, she rushed to the nearest police station, where she met the anxious accountant - identified only as Lin.Lin said she was to have banked in the takings of her workplace. But as she walked to the car, her phone rang, so she placed the bag on the boot.After answering the call, she drove away, completely forgetting about the bag.The 37-year-old woman drove for about 1km before she realised what she had done.
အချစ်သဘောကောင်းလွန်းသည့် ဗြိတိန်သူ အလုပ်မှရပ်စဲခံရ ...ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးနှင့် အိပ်ယာထဲတွင်အတူရှိနေသည်ကိုလက်ပူးလက်ကြပ်တွေ့ ရှိကာလက်မထပ်ပဲ
အပျော်မယ် မော်ဒယ်လိုလည်း ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံတဲ့ လိုင်စင်မရှိပဲ ချစ်ပွဲဝင်ခဲ့ တဲ့ ဒန်နီယယ်စပန်ဆာModelling pose: Expat Danielle Spencer, who may be charged with having extramarital sexထိုဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်ဟာ ပရစ်ဆီလာ ဟုအမည်ရှိသည့် ဘရာဇီးမလေးနှင့် ချစ်သူအဖြစ်မှ လွန်ခဲ့ သည့် တစ်
ပါတီပွဲမှာ ဆင်ကာနွှဲနေတဲ့ မစ္စစပန်ဆာ...ဒီလိုပုံမျိူးနဲ့ ဆိုတော့ နာမည်ကျော်ထိုက်ပါပေတယ်...Standing out: Miss Spencer ataparty
နှစ်ပင်လိမ်၊ သုံးပွင့် ဆိုင်အချစ်နဲ့ နွံနစ်ခဲ့ ရသည့် ဘဏ်လုပ်ငန်းသမား တိုဘီကာရိုးလ်...Still in custody: Banker Toby Carroll လွန်ခဲ့သည့် ညကတော့ သူမ၏မိခင်ဖြစ်သူ အိမ်ထောင်အသစ်ထူထောင်ထားခဲ့ သည့်အိန်ဂျယ်လာဂန်တာ
‘She was clearly intelligent, butareal Walter Mitty character,’ he added. ‘She spoke with an Australian accent, but we later found out she was originally from Hull.’
‘My stomach is inaknot and I honestly don’t know what I can do to help her,’ she told the Daily Mail. ‘It’s every parent’s worst nightmare. I am at the end of my tether.
အပေါ့ သွားယင်း ဆော့ ကစားနိုင်မည့် ဗီဒီယိုဂိမ်း... အပေါ့ သွားယင်းဆော့ကစားနိုင်မည့် ဆီဂါဗီဒီယိုဂိမ်း စနစ်တစ်မျိူးကို ဂျပန်နိုင်ငံမှ ဆီဂါကော်ပိုရေးရှင်းကတီ
အပေါ့ သွားယင်းအပျင်းပြေ အရုပ်ကလေးတွေ ဖျက်လို့ ရတယ်နော်...Graffiti eraserးဒီကစားနည်းကတော့ ရွှေပန်းကရေဖြန်းသူဟာ၎င်း၏ရေပန်းဖြင့် ဖန်သားပြင်ပေါ်မှ ပုံရိပ်
များများသောက်ယင်တော့ များများပေါက်မှာပေါ့ ... Mannekin Pisးဒီကစားနည်းကတော့ ဘရပ်ဆယ်မြို့ ကနာမည်ကျော် ရွှေပြွန်ကရေသွန်နေတဲ့ ကောင်က
Graffiti eraser – in which…”gamers” have to control their urine stream to erase virtual graffiti drawings on the display; The North Wing and Her – in which your urine is displayed asahorny little wind trying to blow the dress offagirl;
Mannekin Pis – named after the famous sculpture ofaboy peeing, in Brussels, this game shows the user how much liquid he urinated. SEGA Toylets are currently available at select locations across Japan, until January 31st. The Japanese developer stated it has no concrete plans to mass produce these funny toilets, but it’s Japan, so you never know.
ရွှေလည်တိုင်ကိုကွယ်... အနမ်းလေးပေးယင်ကွယ်... စိတ်လျှော့ နော်ဆရာ....လေဖြန်းသွားနိုင်တယ်တဲ့ ... ရွှေလည်တိုင်အနမ်းကြောင့် သွေးကြောတောင်ပိတ်သွားခဲ့ ရပြီး လေဖြတ်သွားခဲ့ ရပါတယ်.... Doctors reportedawoman developedablood clot asaresult of receivingahickey. This then led toastroke (posed by models) အချစ်ဆိုတာပူလောင်ပြင်းပျတဲ့ ခံစားမှုဖြစ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံလည်း ထိခိုက်နာကျင်ခံစားရတတ်တယ်ဆိုတာ
Love bites can be dangerous. Pic from www.sixthseal.comဒီလိုရွှေလည်တိုင်ကို အကြင်နာပေးယင် အခန့် မသင်တဲ့ အခါ နာကြင်ပြီး အန္တရယ်ကြီးတတ်ပါတယ်... သူမရဲ့ ချစ်သူနှင့် အကြင်နာအနမ်းတွေဖလှယ်ကာ ကယုကယင်ချစ်တုံ့ တင်ကြပြီးနောက် သူမ၏ဘယ်ဘက်
ကိုလူဆိုးကြောင့် ဒီဆေးရုံကိုရောက်သွားခဲ့ ရပါတယ်... The 44-year-old was taken to the Auckland Middlemore Hospital after she lost the use of her arm
It's well-known to anyone inarelationship that love can hurt - but one woman was left partially paralysed afteraromantic encounter went wrong. In the first reported case of its kind, the 44-year-old from New Zealand sufferedastroke after her amorous partner gave heralove bite. She was driven to hospital in Auckland, New Zealand, after she experienced loss of movement in her left arm after an amorous encounter. Doctors suspected she had hadasmall stroke - but could not find any obvious cause. Then they noticedafading bruise on the right side of her neck -alove bite, also known asahickey. Underneath the bruise they found the cause of the stroke - damage toamajor artery, whereablood clot had formed after the suction of the love bite. The clot had then travelled to the woman's heart, causing the stroke. She then noticed the problem while she was sitting watching television. 'Because it wasalove bite, there would bealot of suction,' said Dr Teddy Wu, who treated the Maori woman at Auckland's Middlemore Hospital. 'To my knowledge, it's the first time someone has been hospitalised bya"hickey",' he said.
news: daily mail / daily chilli
Mindfulnessadaykeeps Dukkha away.
ပြစ်မရှိ ပြစ်ရှာ။လမင်းကိုခွေးဟောင်လို့ရွှေလရောင် ပြောင်မပျက်တယ်ထွန်းလျှက်ပင်သာ။မြရွှေဂူ ပတ္တမြားကိုလ၀က်များက ငြူစူစွာညွန့်လူးကာတိုက်နှဲ။ပွတ်လေလေဂူရွှေမှာ အရောင်ထွက်တယ်ရှေးကထက်ကဲ။
ဆိုပိမ့်မညှာ၊ စေ့စေ့နာလော့၊ဂင်္ဂါသဲမျှ၊ ပွင့်ကုန်ကြသား၊ဘုရားသာသနာ၊ ခေတ်အခါဝယ်၊လူ့ရွာနတ်၌၊ နင်ကြုံကြိုက်လည်း၊အမိုက်မခြွေ၊ အလိုက်နေ၍၊အခြေမကြီး၊ အချည်းနှီးလျှင်၊ယီးတီးယောင်တောင်၊ ခုတိုင်အောင်တည်း။သန်းခေါင် လကွယ်၊တောအုပ်လယ်၌၊ ရှစ်နယ်ပတ်ကုံး၊အပြည့်ဖုံးသည်၊မိုးလုံးတိမ်တိုက်၊လျှပ်မကြိုက်သား၊ အမိုက်အပြား၊အင်လေးပါးထက်၊ နင်ကားရာထောင်၊မကမှောင်၏။လူ့ဘောင် လူ့ရွာ၊ သာသနာ၌၊ကြမ္မာတော်၍၊ ယခုတွေ့လည်း၊အလေ့မလွဲ၊ အများနဲလျှင်၊မိုက်မဲနှင်နှင်၊ မိုက်စရွှင်၏။မျက်မြင်လောက၊ ဤဘ၀ကား၊ဒုက္ခစင်းစင်း၊ ချမ်းသာကင်း၏။သေမင်းအစာ၊ နင့်ခန္ဓာကို၊တဏှာဘီလူး၊ အမှောင့်ပူး၍၊အရူးပြင်ပြင်၊ နင့်ကိုယ်ထင်၏။နင်နှင့်မဆိုင်၊ နင်ပိုင် မဟုတ်၊နင့်ရုပ် နင့်နာမ်၊ နင့်သန္တာန်ကို၊နင့်ဉာဏ်မစူး၊ အပေါ်ဖြူး၍၊မူးမူးမေ့မေ့၊ အများလေ့ဖြင့်၊နေ့ရက်အပုံ၊ လွန်ခဲ့တုံပြီ။အာရုံဝတ္ထု၊ မီးစာစုကို၊မှုမှုရရ၊ နင်အားကျလည်း၊ဓားပြသေမင်း၊ သူ့တပ်နင်းက၊မငြင်းဆန်သာ၊ နင့်ခန္ဓာသည်၊ပြာပုံအပြီး၊ ဖြစ်လုနီးပြီ။ယီးတီးယားတား၊ သေ၍သွားလည်း၊တရားမကြွယ်၊ အထုပ်ငယ်လျက်၊အပါယ်စခန်း၊ သွားမြဲ လမ်း၌၊တပန်းဟိုက်ဟိုက်၊ တရှိုက်ငင်ငင်၊တငြင်ငြိုငြို၊ ဆင်းရဲပိုလျက်၊ထိုထိုဘ၀၊ အနန္တလျှင်၊အစမဆုံး၊ အများထုံးတည်း၊အနှုန်းမပျက်၊ အောက်နရက်ဝယ်၊တသက်နွယ်နွယ်၊ အမြစ်တွယ်သို့၊အပါယ်ထိုထို၊ ဥဒဟိုသည်၊နင်လိုလူမိုက်၊ သွားလမ်းတည်း။
The ultimate tragedy is not the oppression and cruelty by bad people : but, the silence over that by the good people.(Martin Luther King.Jr)၀မ်းနည်းစရာအကောင်းဆုံးကလူဆိုးတွေလူသွမ်းတွေရဲ့ရက်စက်ယုတ်မာမှု့မဟုတ်ပဲလူကောင်းတွေကငြိမ်ခံနေခြင်းသာဖြစ်တယ်....
ယနေ့ အတွက် သတင်းဓါတ်ပုံ....
Study: Single women find married men more attracti...
Indian Chief Minister's wife seeks loan to buy oni...
ကျွန်မတို့ရဲ့ ပထမဆုံး ချစ်သူ
၂၀၁၃ ရဲ့ အခုတလော
အသက်မပြည့် ပြည့်တန်ဆာနှင့် ဆက်ဆံမှုဖြင့် ဘန်ဇီးမားနှင့် ရစ်ဘာရီ တရားစွဲဆိုခံရ
မျက်လုံးတစ်ဖက် ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေကြောင်း ဂျွန်နီဒက်ပ် ပြောကြား
တင့်ဆန်း ၏ ငမိုးရိပ်မှ ငမိုးရိပ်သို့, အပိုင်း (၁၁) (ဇာတ်သိမ်း)
၂၀၁၃-ခု၊ ဇွန်လအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း
အောင်နိုင်စောအမည်ရှိ စင်္ကာပူမှ ဧဝံဂေလိထမင်းမငတ်ဂါထာရွတ်လျှက်ရှိသော ခရစ်ရှန်တစ်ဦးသည် ကျွန်တော်A-Bombကို ထိပ်တိုက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဝံ့သော သတ္တိမရှိလတ္တံ့။ ထို့...
ခရစ်ယာန်များမှ ဓါးမဆရာများနှင့် စိတ်ကူးယဉ် ကရူးဆိတ် ၀ါဒီများက မြန်မာနိုင်ငံအား ခရစ် ယာန်နိုင်ငံ အဖြစ် စိတ်ကူးယဉ် ပုံဖေါ်လျှက် ကြိုးစားနေရာတွင်-ဗုဒ္ဓသာသနာဝင်တ...
ယနေ့ IT ခေတ်တွင် ကြီးပြင်းလာသော လူငယ်များအဖို့ မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့သော အဘိဓမ္မာတရားတွင်ပါသော ဝေါဟာရများနှင့် အတန်ငယ် စိမ်းနေနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ကွန်ပျူတာ ဘ...
To take into the body by the mouth for digestion or absorption.
consume, have, take in